सात प्रदेशका १०० गन्तव्य
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ७७ जिल्लाका एक सय पर्यटकीय गन्तव्यको सूची सार्वजनिक गरेको छ। नयाँ गन्तव्यका रूपमा घोषणा गरिएका ठाउँहरूको पूर्वाधार विकास गर्नेे लक्ष्य लिएर सरकार अघि बढिरहेको
डा. निमा नामग्याल शेर्पा, पर्वतारोही संघका पूर्वकार्यसमिति सदस्य तथा नेपाल चिकित्सक संघका सदस्य पनि हुनुहुन्छ। उहाँले हाइअल्टिच्युट मेडिसिनका विषयमा एमडी गर्नुभएको छ। तर उहाँको ठमेलमा रहेको आउटडोर सेन्टर अफिसमा पुग्दा
प्रकाशकीय : राष्ट्रिय मुद्दामा कामना प्रकाशन
कामना न्यूज पब्लिकेसन्स् प्रालि आजबाट ३५ वर्ष पूरा गरी ३६ वर्षमा प्रवेश गरेको छ। २०४१ साल मंसिर १५ मा चलचित्रसम्बन्धी कामना मासिक पत्रिका प्रकाशन गरेर थालिएको यस प्रकाशनको यात्रामा क्रमशः
ईश्वरराज ढकाल । कक्षा १२ सम्पन्न गरेका विद्यार्थी उच्चशिक्षाको खोजीमा छन्। कुन विषय लिएर कस्तो कलेज छनोट गर्ने ? भन्ने विषयमा विद्यार्थीलाई बुझाउनु जरुरी छ। विद्यालय तह पूरा गरेपछि मात्र
त्रिभुवन विश्वविद्यालय मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकायको विद्यापरिषद्ले चालू शैक्षिक सत्रदेखि चारवर्षे स्नातक तहको पठनपाठन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। यसै गरी बैठकले उक्त चारवर्षे स्नातक तहको नयाँ पाठ्यक्रमको स्वीकृतिसमेत गरेको
नेपालबाट आर्थिक वर्ष २०७५–२०७६ मा नो अब्जेक्सन लेटर(एनओसी) लिने विद्यार्थीको संख्या ६३ हजार २ सय ५९ पुगको छ। सरकारले विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीको संख्या घट्दै गएको दाबी गरेतापनि आर्थिक
टेक्सास इन्टरनेसनल कलेज एक अब्बल, बहुप्रतिष्ठित शैक्षिक प्रतिष्ठान हो। यस कलेजले बहुआयामिक संस्थाका सन् २०१०देखि अध्यापन गर्दै आइरहेको छ। यस संस्थामा विज्ञान, व्यवस्थापन, मानविकी र कानुन संकायतर्फका शैक्षिक गतिविधिहरू सञ्चालन
अर्जुन कार्की । आईटी अर्थात् सूचना प्रविधि भनेको सूचना दिने प्रविधि हो। हाम्रोसामु भएका जुनसुकै प्रविधिले कुनै न कुनै रूपमा सूचना दिएकै पाइन्छ तर ती सबैलाई सूचना प्रविधि भने
विज्ञान डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट बन्ने इच्छा कसलाई हुँदैन र ? विज्ञान विषय पढेर भविष्यमा होनहार व्यक्ति बन्छु भन्ने विद्यार्थीले विज्ञान विषय पढ्ने गरेका छन्। विज्ञानको अध्ययनले चारैतिरको अवसर पाइन्छ। कृषि,
पुष्पराज भट्टराई, विगत केही वर्षदेखि न्यायालयमा सर्वसाधारणको सम्कर्प हुने मध्यस्तरको जनशक्ति तयार पार्न कक्षा ११, १२ मा कानुन विषय पढाइ हुँदै आएको छ। सरकारले नै न्यायपालिका र कानुन मन्त्रालयमा मध्यमस्तरको
पुष्करराज बुढाथोकी, ध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) पार गरेपछिको उच्च शिक्षा अध्ययन दुई धारमा छुट्टिन्छ– साधारण र प्राविधिक। नेपालमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीपको इतिहास विसं १९९९ देखि शुरू भएको
केशरमान श्रेष्ठ, ‘एउटा असल गुरुले प्रेरणा दिन्छ’ शिक्षा क्षेत्रमा चलेको एउटा चर्तित वाणी हो यो। तर नेपालमा अभ्यास भइरेहका शिक्षा प्रणालीले त्यस्तो शिक्षक खोज्न गाह्रो बनाइदिएको छ। एसईई फलामे ढोका
करिश्माको चाहना: सरकारी कलेजमा मावि तहको शिक्षा
विदुर गिरी, पढ्दापढ्दै फिल्म क्षेत्रमा प्रवेश गरेपछि अभिनेतृ तथा चलचित्र निर्मात्री करिश्मा मानन्धर अध्ययनबाट टाढा भएकी थिइन्। फिल्म क्षेत्रमा डुबेको २५ वर्षपछि उनलाई फेरि झोला बोकेर स्कुल जाने रहर जाग्यो।
कपिल काफ्ले, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसर्ईई) को परिणाम सार्वजनिक हुने क्रमसँगै बदलिने शैक्षिक गतिविधिमा न्यु मिडियाको हात कति छ ? २१औं शदाब्दीको आगमनसँगै छाएको इन्टरनेटमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका
ओमशंकर श्रेष्ठ, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) उत्तीर्ण गरेपछि कलेज छान्नु निकै कठिन काम हुन आउँछ। कलेज छनोट गर्ने कार्यले जीवनको पेसा–व्यवसाय–पहिचानको दिशा नै बदलिने भएकाले यसलाई सामान्यरूपमा लिनु पनि हुन्न।
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका विभिन्न समुदायका किशोर किशोरीलाई उनीहरूको भविष्यको चाहना र सपनाका सम्बन्धमा प्रश्न गर्दा परम्परागतभन्दा भिन्न जवाफ प्राप्त भएको छ। पहिला डाक्टर, इन्जिनियर बन्ने चाहना नै पहिलो